Le journal du 07 avril 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Les chocolats de Madagascar sont produits à 100% de cacao malgache qui est parmi les meilleurs cacaos du monde.
Vovonan’ny firaisamonim-pirenena : aiza ho aiza ny toeran’ny tanora ?
Mandray anjara amin’ny fampandrosona sy amin’ny fanamafisana orina ny filaminana ny fanatanjahantena.
Ambatondrazaka: tsy ampy handoavana karaman’ny mpiasa ny vola miditra.
Sehatry ny Cacao : mbola ambany ny fahefa-mividy raha eto Madagasikara.
Studio Sifaka · 2022 - 04 - 07 NY VAOVAO